Tilmaamaha loogu talagalay Naqshadeynta Wadahadalka ee Chatbot - Laga soo bilaabo Landbot | Martech Zone
Chatbots waxay sii wadaan inay sii kordhayaan oo sii casriyeeyaan waxayna bixiyaan khibrad aad u tiro badan oo aan xaddidneyn oo loogu talagalay booqdayaasha goobta marka loo eego xitaa sidii ay sameeyeen sannad ka hor. Naqshadeynta wada hadalka waa udub dhexaadka hawlgal kasta oo chatbot lagu geeyo chat iyo guul darrooyin kasta.
Shabakadaha loo yaqaan 'Chatbots' ayaa loo daad gureeyay si otomaatig ah loo qabto hogaaminta iyo u qalmida, taageerada macaamiisha iyo su'aalaha inta badan la isweydiiyo (FAQs), otomaatiga saaran gawaarida, talooyinka wax soo saarka, maareynta shaqaalaha iyo qorista, sahaminta iyo su'aalaha, ballansashada, iyo boos celinta.
Filashooyinka booqdayaasha degelku waxay ku koreen meeshii ay filayeen inay ka helaan waxa ay u baahan yihiin oo ay si fudud kula soo xiriiraan ama ganacsigaaga haddii ay u baahdaan gargaar dheeraad ah. Caqabada ganacsiyada badan ayaa ah in tirada wada hadalada lagama maarmaanka u ah kala shaandheynta fursada dhabta ah ay caadi ahaan yartahay - marka shirkadaha badanaa waxay isticmaalaan foomamka hogaaminta si ay isugu dayaan una soo xushaan fursadaha ay u maleynayaan inay ka fiican yihiin oo ay iska indha tirayaan inta kale.
Qaababka gudbinta foomku waxay leeyihiin hoos u dhac weyn, in kastoo… waqtiga jawaab. Haddii aadan ka jawaabin codsi kasta oo ansax ah waqtiga ku habboon, waxaad luminaysaa ganacsigii. Run ahaantii, waa arrin ku saabsan boggeyga. Iyada oo kumanaan qof oo soo booqda bishiiba, ma taageeri karo ka jawaabista su'aal kasta - dakhligeygu ma taageerayo taas. Isla mar ahaantaana, in kastoo, aan ogahay inaan tebayo fursado ka iman kara goobta.
Awoodaha Chatbot iyo itaal darrida
Taasi waa sababta ay shirkaduhu ugu darayaan sheekooyinka. Chatbots waxay leeyihiin xoog iyo daciifnimo, in kastoo:
Haddii aad been abuur ka tahay in chatbot-gaagu yahay bini-aadam, booqdahaagu waxay u badan tahay inuu ogaado oo waxaad lumin doontaa kalsoonidooda. Haddii aad dooneysid inaad caawimaad ka hesho bot, u sheeg booqdahaaga inay yihiin bot.
Meelo badan oo chatbot ah ayaa si xun u adag in la isticmaalo. In kasta oo waayo-aragnimadooda soo-booqdayaashu ay noqon karto mid qurux badan, awoodda si dhab ah loo dhiso oo loo geeyo qalab waxtar leh waa riyo-cabsi. Waan ogahay… Waxaan ahay nin farsamo yaqaan ah oo barnaamijyada sameeya oo aan garan karin qaar ka mid ah nidaamyadan.
Geedaha go'aanka wada hadalka waa in si taxaddar leh loo falanqeeyaa loona hagaajiyaa si loo hagaajiyo heerarka beddelashada ee bot-kaaga. Kuma filna inaad dharbaaxo ku dhufato su'aalo dhowr ah oo u qalma - waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale isticmaasho foom, markaa.
Chatbots waxay u baahan yihiin inay ku daraan ka baaraandegidda luqadda dabiiciga ah (NLP) si ay si buuxda u fahmaan degdegga iyo dareenka booqdahaaga, haddii kale, natiijooyinku waa kuwo jahawareer leh oo martida ka fogeyn doona.
Chatt-yada waxay leeyihiin xaddidaadyo, waana inay si habsami leh ugu gacan-geliyaan wadahadalka dadka dhabta ah ee shaqaalahaaga ah markii loo baahdo.
Chatbots waa inay siisaa iibkaaga, suuqgeyntaada, ama kooxaha adeegga macaamiisha xog qani ku ah ogeysiisyada iyo isku dhafka CRM ama taageerida nidaamyada tikidhada.
Si kale haddii loo dhigo, aaladaha loo yaqaan 'chatboot' waa inay kuu sahlanaadaan inaad gudaha galisid oo aad khibrad isticmaale oo aan caadi ahayn ku haysato dibadda. Wax kasta oo ka yar ayaa gaabin doona. Waxaa xiiso leh oo ku filan… waxa chatbot-ka waxtar u leh waa isla mabaadi'da wada hadalka ka dhigaysa mid wax ku ool ah oo u dhaxaysa laba qof ama in ka badan.
Farshaxanka naqshadeynta iyo hagaajinta isdhexgalka yoru chatbot ee martida ayaa loo yaqaan naqshadaynta wada hadalka.
Tilmaamaha Naqshadeynta Wadahadalka
Tani infographic laga soo qaaday Landbot, Madal chatbot ah oo diiradda lagu saaray naqshadaynta wadahadalka, waxay ku jirtaa qorsheyn, saadaalin, iyo fulin istiraatiijiyad wada sheekaysi wadahadal oo weyn.
Naqshadeynta wada hadalka wuxuu ku darayaa qoraalka, nuqulka codka iyo maqalka, waayo-aragnimada isticmaale (UX), nashqadeynta dhaqdhaqaaqa, qaabeynta isdhexgalka, iyo qaabeynta muuqaalka. Waxay ku socotaa saddexda tiir ee qaabeynta wada hadalka:
Mabda'a Iskaashi - wada shaqeyn hoose oo ka dhexeysa chatbot iyo booqdaha ayaa awood u siineysa adeegsiga hadalo aan cadeyn iyo goynyo wada hadal si loo hormariyo wadahadalka.
Wareeg-Qaadasho - ku-soo-noqoshada waqtiga loo yaqaan 'chatbot' iyo booqdaha ayaa muhiim u ah xallinta madmadowga iyo bixinta wadahadal wax ku ool ah.
Macnaha - Wadahadalladu waxay ixtiraamaan xaaladda jireed, maskaxeed, iyo xaalad ee booqdaha ku lug leh.
Si aad u qorsheyso chatbot-kaaga, waa inaad:
Qeex doorka iyo nooca chatbot
Abuur qofkaaga chatbot
Sharax doorkeeda wada hadalka
Qor qoraalkaaga chatbot
Si loo dhammaystiro wadahadal wax ku ool ah oo u dhexeeya bot iyo booqde, waxaa jira cunsurrada isticmaalaha isticmaalaha loo baahan yahay - oo ay ku jiraan salaan, su'aalo, weedho macluumaad, talo soo jeedin, qirashooyin, amarro, xaqiijin, raali gelin, astaamo hadal ah, khaladaad, badhanno, maqal iyo waxyaabo muuqaal ah.
Waa tan faahfaahinta buuxda… Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Naqshadeynta Wadahadalka:
Landbot waxay leedahay qoraal aad u faahfaahsan oo faahfaahsan oo ku saabsan sida aad u qorshayn karto uguna baahin karto chatbot-kaaga barta ay ku leeyihiin.
Akhriso Qodobka Landbot ee Buuxda ee Naqshadeynta Wadahadalka
Muuqaalka Muuqaalka Landbot
Landbot waxay awood siisaa ganacsiyada inay qaabeeyaan khibradaha wada hadalka walxaha UI hodanka ah, otomaatiga shaqada ee horumarsan, Iyo isku dhafka waqtiga-dhabta ah.
Bogagga shabakadaha ayaa ah Landbot-ka awoodaha, laakiin isticmaalayaashu sidoo kale way dhisi karaan bots WhatsApp iyo Facebook Messenger.
Isku day Landbot Maanta
Shaacinta: Anigu waxaan ku xirnahay Landbot.
Tags: affiliaterobotchatbotNaqshadeynta chatbotqorshaynta chatbotchatbot uiinterface chatbot adeegsadeMacnaha guudwada hadalkanaqshadaynta wada hadalkamabda 'iskaashifacebook facebooklandbot